जुलाई 27, 2018 अगस्ट 1, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments खग्रास चन्द्रग्रहण
११ साउन, काठमाडौं । आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुक्रबार राति खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । शुक्रबार आज राति १२ बजेर ९ मिनेटमा चन्द्रग्रहणले स्पर्श गर्नेछ ।
खग्रास चन्द्रग्रहणको सम्मिलन १ बजेर १५ मिनेटमा हुनेछ । खग्रास चन्द्रग्रहणको समाप्ति राति २ बजेर ५८ मिनेटमा हुनेछ । राति २ बजेर ८ मिनेटमा ग्रहणको मध्य र ४ बजेर छ मिनेटमा अन्त्य हुनेछ ।
कूल तीन घण्टा ५७ मिनेट ग्रहण रहनेछ । चन्द्रग्रहणले स्पर्श हुनुभन्दा नौ घण्टाअघि देखि बाल, वृद्ध र रोगी बाहेकलाई शास्त्रीय रुपमा भोजन निषेध गरिएको छ । ग्रहण लागेका बेला हवन, मन्त्र जप, मन्त्र लिने, मन्त्र सिद्धि गर्ने, दान गर्ने लगायत धार्मिक काम गर्न शुभ मानिन्छ ।
ग्रहण लागेका बेला सुत्न, दिसा, पिसाब, मैथुन गर्न नहुने धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु लगायत शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, तेल लगाउन, खानपिन गर्न, कसैलाई बन्धनमा राख्न र मार्न पनि नहुने व्यवस्था छ ।
← मानिसले किन आत्महत्या गर्छन् ?
जडिबुटी के हो ? जडिबुटी नै प्रयोग किन गर्ने ? →